मलेसियाली प्रहरीको खोजीमा रहेका नेपाली युवक को हुन् ! - inaruwaonline.com
मलेसियाली प्रहरीको खोजीमा रहेका नेपाली युवक को हुन् !
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०५, २०७४ समय: ८:१०:५७
काठमाडौं । इन्डोनेसियाली महिलाको हत्या आशंकामा एक नेपाली युवक मलेसियाली प्रहरीको खोजी सूचीमा परेका छन् । सदीप गुरुङ बस्दै आएको अपार्टमेन्ट, जहाँबाट शव बरामद भएको थियो । पेनाङस्थित प्रहरीले २७ वर्षीय सदीप गुरुङको खोजी गरिरहेको छ । त्यहाँको बायान लापास्थित एक फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै आएका उनी हाल फरार छन् ।
सदीपकी प्रेमिका भनिएकी २५ वर्षीया शान्ति रेस्तौली सम्बोलानको हत्या आशंकामा प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको स्थानीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रहरीका अनुसार शान्तिको शव बिहीबार पेनाङको आयर इतामस्थित ग्रिन गार्डेन अपार्टमेन्टको फ्ल्याटको गुरुङ बस्दै आएको कोठामा भेटिएको थियो ।
शव दराजभित्र ताल्चा लगाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । शान्तिको हत्या करिब ३ दिनअघि नै भएको आशंका प्रहरीको छ । उक्त फ्ल्याटमा बस्दै आएका अन्य दुई नेपालीले गुरुङको कोठाबाट नराम्रो गन्ध आएको भन्दै गत बिहीबार राति १० बजे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । गुरुङबारे अन्य जानकारी खुलाइएको छैन । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।